Boeing P8-A Poseidon todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1853
Waxaan dhawaan soo degsaday Boeing P8-A Poseidon ee P3D4 sifiican bayna u shaqaysaa. Su’aashu waxay tahay waxaan rabay inaan casriyeeyo GPS-kiisa hase yeeshe ma ahan faylal la soo dejiyay P3D4 magacyada diyaaradaan ?. Waan ogahay inaan ubaahanahay inaan tafatiro feylka gudiga si aan kor uguqaado GPS laakiin ma jiro feyl aan wax ka badali karo. Muxuu faylka dayuuradaha ugu soo muuqanayaa faylka SimObjects ee gudaha P3D4 ??
Boeing P8-A Poseidon todobaad 2 maalmood ka hor 4 #1872
ma jiraa qof jooga rikoooo ka jawaabi kara dhibaatadan ?????
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.190